အိတ်ဆောင်ဖက်ရှင်နေ့စဉ်ဖက်မျက်မှန်မှန်ဘီလူး - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်မရှိပါ WoopShop®
Unisex ခရီးဆောင်ဖက်ရှင်နေ့စဉ်မျက်မှန်ခြယ်စက် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
စတိုင် - စတိုင်ဝတ်ဆင်
အလင်းရင်းမြစ် - မရှိ
ပစ္စည်း: PC + ပလတ်စတစ်
မှန်ဘီလူးများသည်မှန်ဘီလူး ၁၆၀% သုံး၍ အရာရာကိုပိုမိုကြီးထွားလာစေသည်။
ဆေးညွှန်းမျက်မှန်များ၊ အဆက်အသွယ်များသို့မဟုတ်နေကာမျက်မှန်များကိုပင်အလွယ်တကူ ၀ တ်ဆင်နိုင်သည်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေါ့ပါးသော Unisex frames များကို။
အသေးငယ်ဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပင် ၁၆၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ချဲ့။ လက်ဖြင့်ချဲ့ထားသောမျက်မှန်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်သင့်အားအရာဝတ္ထုများကို ပိုမို၍ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အပ်ချည်ထိုးခြင်းမှသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သေးငယ်သည့်ပုံနှိပ်ခြင်းအထိလွယ်ကူစေရန်သင်၏ဆေးညွှန်းမျက်မှန်များသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်များကို ၀ တ်ဆင်ပါ။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မြန်ဆန်သည့်မှန်ဘီလူးသည်အရာရာကိုပုံပျက်သောအချည်းနှီးမရှိဘဲမြင့်မားသောအဓိပ္ပါယ်ဖြင့်မြင်စေသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်။
1 PC မှန်ဘီလူး
25 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
မှန်ဘီလူးကောင်းစွာထုပ်ပိုးလာ၏။ အပြည့်အဝဖော်ပြချက်ကိုက်ညီ။ သေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အဆင်ပြေသည်။ အလွန်လျှင်မြန်စွာပေးပို့, ငါကုန်ပစ္စည်းများအကြံပြု⭐⭐⭐⭐⭐
ကောင်းတယ် အရာအားလုံးလုံခြုံပြီးအသံလာ၏။ လျောက်ပတ်သောတိုးလာသည့် Read to တံဆိပ်ပေါ်တွင်စာလုံးသေးသေးလေးများပြားလာသည်။ ဖြန့်ဝေသည်တိုသည်၊ လုံခြုံစွာထုပ်ပိုးထားသည်။ ဆိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အချက်များသည်မော်စကိုသို့ ၁၈ ရက်ကြာလျှင်မြန်စွာရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထုပ်ပိုးခြင်း - တစ်ဗိုက်နှင့်အတူတစ်အိတ် (သူတို့နဂိုအတိုင်းဘယ်လိုဘယ်လိုအံ့သြဖွယ်ပါပဲ? ဖော်ပြချက်ကိုက်ညီ။ ဖော်ပြချက်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ပလပ်စတစ်မှန်ဘီလူး + 18 ။ သေးငယ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ရန်သင့်လျော်သည်။
ဖောက်သည် 5.0 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကို5/ 73914 ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
Shea Butter Mask Moisturizing & Shinking Pores မျက်နှာမျက်နှာဖုံး
whitening effect နှင့်အတူအေးမြမျက်နှာဖုံး !!! အဆီမဟုတ်, ဒုတိယအကြိမ်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ကျိန်းသေအကြံပြု !!!